Isi - Florida International Trade Expo
Onye Nduzi Omume nke Onye Mere
Awardlọ Ọrụ Onyinye Expo
Pịa / Mgbasa ozi
Ihe ngosi ahia ahia mba ụwa nke Florida
Machị 16 - 18, 2021 | Mebere
Pịa ebe a ka ị nweta ebe a na-ahụ anya
Na-agagharị na Florida International Trade Expo
Lelee nkuzi vidiyo dị mkpirikpi iji mụtakwuo banyere usoro ihe omume mmemme na otu esi emekọrịta ihe na ndị ngosi.
Nsụgharị Nsụgharị Spanish
Otutu Ihe ngosi Virtual nke Florida
Eduga Ngwaahịa na
Enterprise Florida, (EFI), ndị ọrụ gọọmentị na-ahụ maka mmepe akụ na ụba na azụmaahịa maka Steeti Florida, nwere obi ụtọ ibupụta Florida International Trade Expo nke mbụ, ngosi ngosi ngosi nke 150 + nke ndị na-eweta ngwaahịa na ndị ọrụ steeti.
Ndị ọrụ, ndị nkesa, ndị na-azụ ahịa, ndị nnọchi anya, na ndị na-ere ahịa na-achọ ngwaahịa dị elu maka nkesa na ọrịre na Europe, Latin America na Caribbean, Canada, Mexico, Africa, Asia na Middle East.
Ihe ngosi a na-enye ohere di omimi enweghi ike!
Jikọọ na ndị na-egosi florida
Hazie Nzukọ Ezubere Iche
Network na ndị ọgbọ ụlọ ọrụ
lee ọdịnaya mgbasa ozi dị ndụ
Ijikọ gị na ndị na - eme mkpebi na Florida site na ọtụtụ ụlọ ọrụ.
Ndị ọrụ ụlọ ọrụ nwere ike ịgụnye, mana ọnweghị oke na:
&Gbọelu & Aerospace
Teknụzụ dị ọcha
Ngwongwo ndi eji eme ihe
Ọrụ Ego na Ọkachamara
Ọkụ & Nchedo
Akụrụngwa & Ngwa
Nkà Mmụta Ndụ na Nkà na Medicalzụ
Ngwaahịa, Nkesa & Akụrụngwa
Ngwa akụrụngwa na ụgbọ mmiri
Agbaghara ihe omume ahụ? Ikpokoro mebere na-emeghe ugbu a maka ndị ọbịa.
Emeela aha gị ugbu a?
Mmemme Platform dị ụbọchị 30 ụbọchị emume.
Ihe omume a bu nkwado ma kwado ya:
email floridaexpo@enterpriseflorida.com ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ gbasara isonye na ịdenye aha na Florida International Trade Expo.
2022 Florida International Trade Expo. Ejiri WordPress n'efu Ugbo